ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလ ထိ) နိုင်ငံအလိုက် (ပယ်လယ်ရေကြောင်း+နယ်စပ်) ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ | Commerce
ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလ ထိ) နိုင်ငံအလိုက် (ပယ်လယ်ရေကြောင်း+နယ်စပ်) ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ
Fri, 06/09/2017 - 02:34 -- dccaadmin
စဉ် နိုင်ငံ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (ဧပြီလထိ)
၁ အာရှနိုင်ငံများ ၈၆၂၀.၂၃၃ ၈၁၈၂.၃၇၇ ၁၆၈၀၂.၆၁၀ ၈၅၇၀.၁၆၉ ၈၄၁၆.၆၄၉ ၁၆၉၈၆.၈၁၈ ၁၀၈၂၆.၈၈၇ ၁၂၉၄၈.၃၅၅ ၂၃၇၇၅.၂၄၂ ၁၁၉၆၄.၈၀၀ ၁၅၃၅၆.၀၂၃ ၂၇၃၂၀.၈၂၃ ၁၀၄၉၀.၃၄၀ ၁၅၆၀၉.၉၁၇ ၂၆၁၀၀.၂၅၇ ၁၀၅၀၈.၃၄၁ ၁၅၂၀၉.၃၇၃ ၂၅၇၁၇.၇၁၄ ၇၃၁.၄၁၃ ၉၉၆.၈၃၄ ၁၇၂၈.၂၄၇
၁ အာဆီယံ ၄၆၇၆.၆၇၉ ၄၀၂၀.၅၆၁ ၈၆၉၇.၂၄၀ ၄၅၂၉.၇၇၂ ၃၈၈၁.၆၅၂ ၈၄၁၁.၄၂၄ ၅၂၉၅.၂၇၁ ၅၇၄၂.၈၇၆ ၁၁၀၃၈.၁၄၇ ၅၂၃၆.၁၆၇ ၇၃၆၈.၆၅၃ ၁၂၆၀၄.၈၂၀ ၃၉၈၅.၃၉၉ ၆၄၄၇.၁၃၁ ၁၀၄၃၂.၅၃၀ ၃၀၉၃.၆၈၃ ၆၅၁၃.၄၅၅ ၉၆၀၇.၁၃၈ ၃၀၈.၆၇၅ ၄၀၇.၂၆၁ ၇၁၅.၉၃၆
1. ကမ္ဘောဒီးယား ဝ.၃၆၁ ၁.၁၁၆ ၁.၄၇၇ ဝ.၀၂၀ ဝ.၃၆၉ ဝ.၃၈၉ ဝ.၂၃၄ ဝ.၇၁၂ ဝ.၉၄၆ ဝ.၄၆၂ ဝ.၇၅၈ ၁.၂၂၀ ဝ.၀၁၅ ဝ.၈၈၃ ဝ.၈၉၈ ၂.၆၅၃ ဝ.၃၁၅ ၂.၉၆၈ ဝ.၁၅၀ ဝ.၀၁၅ ဝ.၁၆၅
2. စင်္ကာပူ ၅၄၂.၇၅၁ ၂၅၁၆.၁၃၃ ၃၀၅၈.၈၈၄ ၂၉၁.၃၅၀ ၂၅၃၅.၄၂၄ ၂၈၂၆.၇၇၄ ၆၉၄.၀၂၇ ၂၉၁၀.၂၂၂ ၃၆၀၄.၂၄၉ ၇၅၈.၅၃၅ ၄၁၃၇.၃၆၈ ၄၈၉၅.၉၀၃ ၇၂၅.၄၃၄ ၂၉၇၀.၈၉၈ ၃၆၉၆.၃၃၂ ၄၇၂.၇၆၄ ၂၄၉၄.၃၁၅ ၂၉၆၇.၀၇၉ ၇၉.၅၉၅ ၁၇၃.၁၅၅ ၂၅၂.၇၅၀
3. ထိုင်း ၃၈၂၃.၈၂၇ ၆၉၁.၁၃၉ ၄၅၁၄.၉၆၆ ၄၀၀၀.၅၇၇ ၆၉၆.၇၉၃ ၄၆၉၇.၃၇၀ ၄၃၀၄.၀၁၉ ၁၃၆၂.၄၆၅ ၅၆၆၆.၄၈၄ ၄၀၃၁.၇၅၆ ၁၆၇၉.၄၃၆ ၅၇၁၁.၁၉၂ ၂၈၉၃.၁၈၀ ၁၉၇၂.၈၈၅ ၄၈၆၆.၀၆၅ ၂၂၀၄.၃၅၂ ၂၀၇၃.၄၀၁ ၄၂၇၇.၇၅၃ ၁၈၇.၄၀၆ ၁၀၂.၆၅၄ ၂၉၀.၀၆၀
ပုံမှန် ၃၆၄၈.၆၆၅ ၅၂၂.၉၉၆ ၄၁၇၁.၆၆၁ ၃၇၇၆.၀၀၅ ၅၀၂.၈၂၀ ၄၂၇၈.၈၂၅ ၄၀၈၈.၈၇၃ ၉၂၇.၄၈၂ ၅၀၁၆.၃၅၅ ၃၈၄၇.၇၇၈ ၁၀၃၇.၉၇၂ ၄၈၈၅.၇၅၀ ၂၆၅၀.၁၁၇ ၁၀၉၆.၁၆၇ ၃၇၄၆.၂၈၄ ၁၈၈၉.၆၁၆ ၁၀၁၉.၁၁၇ ၂၉၀၈.၇၃၃ ၁၆၀.၂၅၂ ၄၆.၇၇ ၂၀၇.၀၂၂
နယ်စပ် ၁၇၅.၁၆၂ ၁၆၈.၁၄၃ ၃၄၃.၃၀၅ ၂၂၄.၅၇ ၁၉၃.၉၇ ၄၁၈.၅၄၅ ၂၁၅.၁၄၆ ၄၃၄.၉၈၃ ၆၅၀.၁၂၉ ၁၈၃.၉၇၈ ၆၄၁.၄၆၄ ၈၂၅.၄၄၂ ၂၄၃.၀၆၃ ၈၇၆.၇၁၈ ၁၁၁၉.၇၈၁ ၃၁၄.၇၃၆ ၁၀၅၄.၂၈၄ ၁၃၆၉.၀၂၀ ၂၇.၁၅၄ ၅၅.၈၈၄ ၈၃.၀၃၈
4. ဖီလစ်ပိုင် ၃၄.၃၂၃ ၁၄.၆၃၆ ၄၈.၉၅၉ ၂၆.၀၁၇ ၁၇.၉၉၅ ၄၄.၀၁၂ ၁၂.၂၅၀ ၂၁.၁၀၃ ၃၃.၃၅၃ ၁၂.၇၇၈ ၁၅.၄၂၂ ၂၈.၂၀၀ ၈.၂၃၂ ၂၀.၇၆၆ ၂၈.၉၉၈ ၄၀.၉၈၅ ၁၅.၄၉၈ ၅၆.၄၈၃ ၂.၀၄၁ ၁.၇၄ ၃.၇၈၁
5. ဗီယက်နမ် ၈၁.၀၉၀ ၆၂.၂၉၀ ၁၄၃.၃၈၀ ၈၁.၂၄၃ ၇၄.၇၁၆ ၁၅၅.၉၅၉ ၁၁၁.၁၅၅ ၁၆၉.၈၅၉ ၂၈၁.၀၁၄ ၈၀.၁၈၁ ၂၄၁.၁၅၃ ၃၂၁.၃၃၄ ၅၆.၆၆၉ ၂၉၀.၁၈၉ ၃၄၆.၈၅၈ ၈၈.၂၅၃ ၄၀၅.၇၈၃ ၄၉၄.၀၃၆ ၁၅.၄၉၁ ၃၀.၇၆၄ ၄၆.၂၅၅
6. ဘရူနိုင်း ၁.၃၂၆ ဝ.၀၁၇ ၁.၃၄၃ ဝ.၉၀၃ ဝ.၉၀၃ ၄.၂၈၄ ၄.၂၈၄ ဝ.၇၂၆ ဝ.၀၂၃ ဝ.၇၄၉ ဝ.၃၁၈ ဝ.၇၂၈ ၁.၀၄၆ ဝ.၅၈၀ ဝ.၂၇၇ ဝ.၈၅၇ ဝ.၀၁၁ ဝ.၀၁၁
7. မလေးရှား ၁၅၂.၀၃၈ ၃၀၃.၄၁၀ ၄၅၅.၄၄၈ ၉၇.၉၇၇ ၃၆၀.၉၀၂ ၄၅၈.၈၇၉ ၁၀၈.၈၆၈ ၈၃၉.၆၉၂ ၉၄၈.၅၆၀ ၂၆၄.၉၉၉ ၇၄၃.၉၅၆ ၁၀၀၈.၉၅၅ ၁၆၁.၃၂၀ ၅၈၈.၇၂၂ ၇၅၀.၀၄၂ ၁၅၉.၀၀၉ ၈၂၁.၃၆၉ ၉၈၀.၃၇၈ ၁၄.၈၂၈ ၅၂.၈၅၁ ၆၇.၆၇၉
8. လာအို ဝ.၀၂၇ ဝ.၀၂၇ ဝ.၁၄၈ ဝ.၂၂၄ ဝ.၃၇၂ ဝ.၃၉၄ ဝ.၀၀၇ ဝ.၄၀၁ ဝ.၆၈၅ ဝ.၀၂၄ ဝ.၇၀၉ ဝ.၃၉၅ ဝ.၁၀၁ ဝ.၄၉၆ ဝ.၀၄၁ ဝ.၄၀၉ ဝ.၄၅၀ ဝ.၁၃၇ ဝ.၁၃၇
9. အင်ဒိုနီးရှား ၄၀.၉၃၆ ၄၃၁.၈၂၀ ၄၇၂.၇၅၆ ၃၁.၅၃၇ ၁၉၅.၂၂၉ ၂၂၆.၇၆၆ ၆၀.၀၄၀ ၄၃၈.၈၁၆ ၄၉၈.၈၅၆ ၈၆.၀၄၅ ၅၅၀.၅၁၃ ၆၃၆.၅၅၈ ၁၃၉.၈၃၆ ၆၀၁.၉၅၉ ၇၄၁.၇၉၅ ၁၂၅.၀၄၆ ၇၀၂.၀၈၈ ၈၂၇.၁၃၄ ၉.၁၆၄ ၄၅.၉၃၄ ၅၅.၀၉၈
၂ အရှေ့အာရှ ၂၇၉၀.၉၂၃ ၃၈၁၂.၇၃၂ ၆၆၀၃.၆၅၅ ၂၉၃၈.၄၂၆ ၄၂၁၂.၁၀၀ ၇၁၅၀.၅၂၆ ၄၂၈၆.၂၁၉ ၆၆၈၅.၆၃၀ ၁၀၉၇၁.၈၄၉ ၅၉၁၀.၅၄၀ ၇၃၅၁.၉၆၅ ၁၃၂၆၂.၅၀၅ ၅၅၃၈.၇၉၄ ၈၃၀၈.၄၂၈ ၁၃၈၄၇.၂၂၂ ၆၃၅၂.၅၁၂ ၇၆၂၄.၉၉၄ ၁၃၉၇၇.၅၀၆ ၃၄၅.၆၀၀ ၅၀၇.၈၈၂ ၈၅၃.၄၈၁
1. ဂျပန် ၃၂၀.၂၀၁ ၅၀၂.၁၇၃ ၈၂၂.၃၇၄ ၄၀၆.၄၈၇ ၁၀၉၁.၇၃၂ ၁၄၉၈.၂၁၉ ၅၁၃.၂၄၅ ၁၂၉၆.၂၄၁ ၁၈၀၉.၄၈၆ ၅၅၅.၆၅၃ ၁၇၄၉.၃၈၀ ၂၃၀၅.၀၃၃ ၃၉၃.၇၅၃ ၁၄၅၂.၂၂၅ ၁၈၄၅.၉၇၈ ၇၈၄.၂၅၇ ၁၂၄၇.၅၃၄ ၂၀၃၁.၇၉၁ ၅၅.၂၂၀ ၅၄.၁၅၇ ၁၀၉.၃၇၇
2. တရုတ် ၂၂၁၄.၂၉၈ ၂၇၈၆.၈၄၇ ၅၀၀၁.၁၄၅ ၂၂၃၈.၀၆၉ ၂၇၁၉.၄၈၆ ၄၉၅၇.၅၅၅ ၂၉၁၃.၆၃၄ ၄၁၁၉.၄၅၂ ၇၀၃၃.၀၈၆ ၄၆၉၂.၄၆၁ ၅၀၁၉.၆၂၉ ၉၇၁၂.၀၉၀ ၄၅၉၆.၉၆၂ ၆၃၉၅.၄၈၀ ၁၀၉၉၂.၄၄၂ ၅၀၀၆.၁၁၉ ၅၇၅၀.၀၀၃ ၁၀၇၅၆.၁၂၂ ၂၆၉.၀၆၁ ၄၀၇.၆၇၃ ၆၇၆.၇၃၃
ပုံမှန် ၃၉၂.၄၀၀ ၁၆၂၃.၃၂၁ ၂၀၁၅.၇၂၁ ၃၄၁.၁၈၃ ၁၆၇၈.၂၄၉ ၂၀၁၉.၄၃၂ ၄၁၁.၃၉၀ ၂၇၅၁.၆၉၆ ၃၁၆၃.၀၈၆ ၆၄၀.၁၆၁ ၃၁၈၅.၂၅၈ ၃၈၂၅.၄၁၉ ၃၅၄.၈၃၇ ၄၆၈၆.၉၂ ၅၀၄၁.၇၅၇ ၅၃၄.၂၄၃ ၃၉၇၃.၈၇၈ ၄၅၀၈.၁၂၁ ၃၉.၅၉၈ ၂၇၅.၁၉၂ ၃၁၄.၇၉၀
နယ်စပ် ၁၈၂၁.၈၉၈ ၁၁၆၃.၅၂၆ ၂၉၈၅.၄၂၄ ၁၈၉၆.၈၈၆၀ ၁၀၄၁.၂၃၇၀ ၂၉၃၈.၁၂၃ ၂၅၀၂.၂၄၄ ၁၃၆၇.၇၅၆ ၃၈၇၀.၀၀၀ ၄၀၅၂.၃၀၀ ၁၈၃၄.၃၇၁ ၅၈၈၆.၆၇၁ ၄၂၄၂.၁၂၅ ၁၇၀၈.၅၆၀ ၅၉၅၀.၆၈၅ ၄၄၇၁.၈၇၆ ၁၇၇၆.၁၂၅ ၆၂၄၈.၀၀၁ ၂၂၉.၄၆၃ ၁၃၂.၄၈၁ ၃၆၁.၉၄၃
3. ထိုင်ဝမ် ဝ.၀၅၄ ၆၂.၀၆၂ ၆၂.၁၁၆ ဝ.၀၈၄ ၄၃.၀၇၀ ၄၃.၁၅၄ ဝ.၈၃၁ ၃၇.၇၂၆ ၃၈.၅၅၇ ၁.၅၀၅ ၃၃.၃၆၉ ၃၄.၈၇၄ ၄.၇၈၁ ၂၉.၃၆၅ ၃၄.၁၄၆ ၁၄.၄၉၃ ၆၇.၂၃၆ ၈၁.၇၂၉ ဝ.၆၉၁ ၁၃.၅၅၁ ၁၄.၂၄၂
4. တောင်ကိုရီးယား ၂၁၄.၈၂၁ ၄၅၁.၉၂၆ ၆၆၆.၇၄၇ ၂၈၀.၇၆၆ ၃၄၃.၂၁၈ ၆၂၃.၉၈၄ ၃၅၂.၉၁၈ ၁၂၁၇.၉၈၀ ၁၅၇၀.၈၉၈ ၃၆၉.၆၀၄ ၄၉၂.၉၈၉ ၈၆၂.၅၉၃ ၂၅၉.၉၄၅ ၃၉၆.၅၉၁ ၆၅၆.၅၃၆ ၃၄၂.၄၃၂ ၅၂၃.၆၃၆ ၈၆၆.၀၆၈ ၁၈.၆၈၆ ၃၀.၅၉၃ ၄၉.၂၇၉
5. မြောက်ကိုရီးယား ဝ.၀၇၅ ဝ.၀၀၉ ဝ.၀၈၄ ဝ.၂၉၄ ဝ.၀၃၈ ဝ.၃၃၂ ၁၆.၄၈၈ ဝ.၅၃၉ ၁၇.၀၂၇ ၂.၇၉၀ ၁.၂၃၆ ၄.၀၂၆ ဝ.၅၄၅ ၁.၂၁ ၁.၇၅၅ ၁.၀၄၆ ၁.၂၈၂ ၂.၃၂၈
6. ဟောင်ကောင် ၄၁.၄၇၄ ၉.၇၁၅ ၅၁.၁၈၉ ၁၂.၇၂၆ ၁၄.၅၅၆ ၂၇.၂၈၂ ၄၈၉.၁၀၃ ၁၃.၆၉၂ ၅၀၂.၇၉၅ ၂၈၈.၅၂၇ ၅၅.၃၆၂ ၃၄၃.၈၈၉ ၂၈၂.၈၀၈ ၃၃.၅၅၇ ၃၁၆.၃၆၅ ၂၀၄.၁၆၅ ၃၅.၃၀၃ ၂၃၉.၄၆၈ ၁.၉၄၂ ၁.၉၀၈ ၃.၈၅၀
၃ တောင်အာရှ ၁၁၄၀.၀၅၂ ၃၄၇.၅၄၅ ၁၄၈၇.၅၉၇ ၁၀၇၄.၅၉၅ ၃၂၁.၈၂၉ ၁၃၉၆.၄၂၄ ၁၂၂၉.၅၈၁ ၅၁၄.၈၉၇ ၁၇၄၄.၄၇၈ ၈၀၂.၅၀၈ ၆၁၀.၁၀၀ ၁၄၁၂.၆၀၈ ၉၆၂.၂၉၄ ၈၃၀.၀၈၆ ၁၇၉၂.၃၈၁ ၁၀၅၃.၇၂၄ ၁၀၃၇.၅၁၅ ၂၀၉၁.၂၄၀ ၇၅.၉၇၃ ၈၀.၉၉၁ ၁၅၆.၉၆၅
1. ပါကစ္စတန် ၂၃.၀၀၇ ၇.၂၈၄ ၃၀.၂၉၁ ၂၄.၀၉၅ ၇.၇၉၇ ၃၁.၈၉၂ ၂၆.၃၆၂ ၅.၀၅၂ ၃၁.၄၁၄ ၂၃.၂၀၈ ၅.၄၃၁ ၂၈.၆၃၉ ၃၇.၀၇၅ ၇.၃၂ ၄၄.၃၉၅ ၆၁.၇၂၃ ၁၇.၉၅၆ ၇၉.၆၇၉ ၂.၄၃၃ ၁၃.၄၁ ၁၅.၈၄၃
2. ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ၇၀.၅၈၆ ၁၄.၂၁၉ ၈၄.၈၀၅ ၃၁.၀၈၈ ၁၂.၁၇၈ ၄၃.၂၆၆ ၅၉.၀၈၉ ၁၅.၉၂၅ ၇၅.၀၁၄ ၃၀.၀၇၉ ၉.၁၅၀ ၃၉.၂၂၉ ၁၈.၁၂၅ ၁၅.၂၅၉ ၃၃.၃၈၄ ၂၃.၉၉၆ ၁၉.၉၆၃ ၄၃.၉၅၉ ၁.၇၀၆ ၁.၇၆၁ ၃.၄၆၇
ပုံမှန် ၄၈.၁၂၁ ၁၂.၈၂၄ ၆၀.၉၄၅ ၂၇.၄၃၂ ၁၂.၀၀၃ ၃၉.၄၃၅ ၄၃.၂၆၀ ၈.၉၂၄ ၅၂.၁၈၄ ၁၅.၉၈၆ ၈.၉၅၈ ၂၄.၉၄၄ ၇.၄၁၁ ၁၄.၂၁၂ ၂၁.၆၂၃ ၁၃.၆၁၃ ၁၉.၇၅၂ ၃၃.၃၆၅ ဝ.၈၉၄ ၁.၇၅၄ ၂.၆၄၈
နယ်စပ် ၂၂.၄၆၅ ၁.၃၉၅ ၂၃.၈၆၀ ၃.၆၅၆၀ ဝ.၁၇၅၀ ၃.၈၃၁ ၁၅.၈၂၉ ၇.၀၀၁ ၂၂.၈၃၀ ၁၄.၀၉၃ ဝ.၁၉၂ ၁၄.၂၈၅ ၁၀.၇၁၄ ၁.၀၄၇ ၁၁.၇၆၁ ၁၀.၃၈၃ ဝ.၂၁၁ ၁၀.၅၉၄ ဝ.၈၁၂ ဝ.၀၀၇ ဝ.၈၁၉
3. သီရိလင်္ကာ ဝ.၄၇၄ ဝ.၆၆၁ ၁.၁၃၅ ဝ.၇၂၀ ဝ.၁၅၀ ဝ.၈၇၀ ဝ.၇၄၄ ဝ.၃၈၇ ၁.၁၃၁ ၃.၄၁၇ ဝ.၇၄၃ ၄.၁၆၀ ၂.၉၃၂ ဝ.၁၅၃ ၃.၀၈၅ ၂၄.၅၂၉ ဝ.၂၁၉ ၂၄.၇၄၈ ၁.၄၃၄ ဝ.၀၄၈ ၁.၄၈၂
4. အိန္ဒိယ ၁၀၄၅.၉၈၅ ၃၂၅.၃၈၁ ၁၃၇၁.၃၆၆ ၁၀၁၈.၆၉၂ ၃၀၁.၇၀၄ ၁၃၂၀.၃၉၆ ၁၁၄၃.၃၈၆ ၄၉၃.၅၃၃ ၁၆၃၆.၉၁၉ ၇၄၅.၈၀၄ ၅၉၄.၇၇၆ ၁၃၄၀.၅၈၀ ၉၀၄.၁၆၂ ၈၀၇.၃၅၅ ၁၇၁၁.၅၁၇ ၉၄၃.၄၇၆ ၉၉၉.၃၇၈ ၁၉၄၂.၈၅၄ ၇၀.၄၀၀ ၆၅.၇၇၂ ၁၃၆.၁၇၂
ပုံမှန် ၁၀၃၇.၁၁၆ ၃၁၈.၈၄၁ ၁၃၅၅.၉၅၇ ၁၀၀၉.၈၃၅ ၂၉၈.၅၃၄ ၁၃၀၈.၃၆၉ ၁၁၁၅.၄၁၅ ၄၇၆.၃၆၉ ၁၅၉၁.၇၈၄ ၇၀၃.၁၉၁ ၅၇၆.၆၆၃ ၁၂၇၉.၈၅၄ ၈၅၁.၁၃၅ ၇၈၈.၇၃၈ ၁၆၃၉.၈၇၃ ၈၈၀.၀၁၆ ၉၇၄.၉၄၂ ၁၈၅၄.၉၅၈ ၆၇.၀၂၉ ၆၃.၇၂၉ ၁၃၀.၇၅၈
နယ်စပ် ၈.၈၆၉ ၆.၅၄၀ ၁၅.၄၀၉ ၈.၈၅၇ ၃.၁၇၀ ၁၂.၀၂၇ ၂၇.၉၇၁ ၁၇.၁၆၄ ၄၅.၁၃၅ ၄၂.၆၁၃ ၁၈.၁၁၃ ၆၀.၇၂၆ ၅၃.၀၂၇ ၁၈.၆၁၇ ၇၁.၆၄၄ ၆၃.၄၆၀ ၂၄.၄၃၆ ၈၇.၈၉၆ ၃.၃၇၁ ၂.၀၄၃ ၅.၄၁၄
၄ မြောက်အာရှ ၁၂.၅၇၉ ၁.၅၃၉ ၁၄.၁၁၈ ၂၇.၃၇၆ ၁.၀၆၈ ၂၈.၄၄၄ ၁၅.၈၁၆ ၄.၉၅၂ ၂၀.၇၆၈ ၁၅.၅၈၅ ၂၅.၃၀၅ ၄၀.၈၉၀ ၃.၈၅၂ ၂၄.၂၇၂ ၂၈.၁၂၄ ၈.၄၂၂ ၃၃.၄၀၉ ၄၁.၈၃၁ ၁.၁၆၅ ဝ.၇၀၀ ၁.၈၆၅
1. ရုရှ ၁၂.၅၇၉ ၁.၅၃၉ ၁၄.၁၁၈ ၂၇.၃၇၆ ၁.၀၆၈ ၂၈.၄၄၄ ၁၅.၈၁၆ ၄.၉၅၂ ၂၀.၇၆၈ ၁၅.၅၈၅ ၂၅.၃၀၅ ၄၀.၈၉၀ ၃.၈၅၂ ၂၄.၂၇၂ ၂၈.၁၂၄ ၈.၄၂၂ ၃၃.၄၀၉ ၄၁.၈၃၁ ၁.၁၆၅ ဝ.၇ ၁.၈၆၅
၂ ဥရောပနိုင်ငံများ ၁၄၉.၅၀၉ ၂၆၃.၁၃၁ ၄၁၂.၆၄၀ ၁၄၂.၆၉၄ ၂၆၅.၆၈၉ ၄၀၈.၃၈၃ ၁၉၅.၃၀၃ ၃၅၇.၈၁၃ ၅၅၃.၁၁၆ ၃၁၅.၀၂၀ ၃၄၀.၂၄၁ ၆၅၅.၂၆၁ ၃၅၃.၉၈၈ ၃၂၂.၃၅၃ ၆၇၆.၃၄၁ ၈၂၈.၉၉၂ ၆၂၇.၇၉၉ ၁၄၅၆.၇၉၁ ၇၄.၇၀၁ ၂၈.၃၆၇ ၁၀၃.၀၆၈
၁ ဥရောပသမဂ္ဂ ၁၄၄.၀၃၁ ၂၆၀.၀၈၁ ၄၀၄.၁၁၂ ၁၃၈.၇၁၇ ၂၆၁.၃၁၈ ၄၀၀.၀၃၅ ၁၉၁.၄၁၀ ၃၅၁.၂၃၁ ၅၄၂.၆၄၁ ၃၀၉.၈၇၈ ၃၂၀.၈၃၀ ၆၃၀.၇၀၈ ၃၄၂.၁၈၁ ၃၁၀.၇၈၉ ၆၅၂.၉၇၀ ၈၁၅.၄၉၄ ၆၀၅.၂၁၆ ၁၄၂၀.၇၁၀ ၇၄.၂၂၃ ၂၇.၈၁၆ ၁၀၂.၀၃၉
1. ချက်ရီပက်ဗလစ် ဝ.၁၈၆ ဝ.၂၇၈ ဝ.၄၆၄ ဝ.၁၃၄ ဝ.၁၃၄ ဝ.၀၅၅ ဝ.၀၀၁ ဝ.၀၅၆ ဝ.၇၉၅ ဝ.၃၇၇ ၁.၁၇၂ ၁.၄၅၂ ဝ.၅၇ ၂.၀၂၂ ၇.၃၂၀ ၃.၁၁၄ ၁၀.၄၃၄ ဝ.၄၉၈ ဝ.၄၈ ဝ.၉၇၈
2. ဂရိ ၉.၇၉၀ ၁.၂၀၄ ၁၀.၉၉၄ ၂.၈၆၀ ဝ.၃၈၃ ၃.၂၄၃ ၁၄.၂၇၂ ၄.၉၃၂ ၁၉.၂၀၄ ဝ.၈၁၆ ၃.၅၄၂ ၄.၃၅၈ ၇.၀၃၀ ၃.၅၀၇ ၁၀.၅၃၇ ၁.၀၆၆ ၁.၅၀၇ ၂.၅၇၃ ဝ.၀၈၆ ဝ.၀၇၇ ဝ.၁၆၃
3. ဂျာမနီ ၄၂.၃၂၉ ၉၅.၁၁၉ ၁၃၇.၄၄၈ ၄၂.၉၇၉ ၁၄၄.၅၅၃ ၁၈၇.၅၃၂ ၄၀.၃၆၁ ၈၃.၂၃၆ ၁၂၃.၅၉၇ ၆၈.၀၉၄ ၇၉.၀၉၁ ၁၄၇.၁၈၅ ၈၅.၀၄၀ ၆၈.၇၄၁ ၁၅၃.၇၈၁ ၂၁၉.၇၄၂ ၁၂၂.၃၆၇ ၃၄၂.၁၀၉ ၁၉.၂၉၀ ၇.၂၉၅ ၂၆.၅၈၅
4. စပိန် ၁၆.၀၅၀ ၆.၀၈၂ ၂၂.၁၃၂ ၁၉.၈၆၁ ၂.၉၁၄ ၂၂.၇၇၅ ၂၈.၉၅၈ ၁၂.၆၂၆ ၄၁.၅၈၄ ၃၇.၈၉၇ ၆.၃၆၂ ၄၄.၂၅၉ ၃၇.၅၅၈ ၁၁.၃၆၆ ၄၈.၉၂၄ ၈၂.၄၈၈ ၂၆.၇၇၆ ၁၀၉.၂၆၄ ၃.၁၀၅ ဝ.၈၉၁ ၃.၉၉၆
5. ဆိုက်ပရပ်စ် ဝ.၀၁၂ ဝ.၅၀၉ ဝ.၅၂၁ ဝ.၃၃၀ ဝ.၅၄၁ ဝ.၈၇၁ ဝ.၇၀၃ ဝ.၇၀၃ ဝ.၀၀၃ ဝ.၅၁၅ ဝ.၅၁၈ ဝ.၀၂၆ ဝ.၃၉၄ ဝ.၄၂၀ ဝ.၀၇၈ ၁.၀၃၈ ၁.၁၁၆ ဝ.၀၁၁ ဝ.၀၁၁
6. ဆွီံဒင် ၂.၅၇၂ ၁၇.၅၆၉ ၂၀.၁၄၁ ၁.၉၈၆ ၁၀.၆၈၉ ၁၂.၆၇၅ ၄.၃၁၉ ၇.၈၂၀ ၁၂.၁၃၉ ၂၈.၁၆၀ ၁၃.၀၉၈ ၄၁.၂၅၈ ၇.၉၇၆ ၁၃.၃၄၇ ၂၁.၃၂၃ ၁၈.၂၇၄ ၄၃.၇၂၂ ၆၁.၉၉၆ ၁.၃၇၀ ၁.၄၈၃ ၂.၈၅၃
7. ဒိန်းမတ် ၁.၇၃၆ ၁.၁၃၃ ၂.၈၆၉ ၁.၆၀၄ ၂.၅၀၂ ၄.၁၀၆ ၂.၀၀၅ ၂၅.၁၄၅ ၂၇.၁၅၀ ၆.၁၂၄ ၉.၁၃၅ ၁၅.၂၅၉ ၃.၉၇၂ ၂၈.၄၄၄ ၃၂.၄၁၆ ၂၃.၂၇၇ ၃၅.၃၈၀ ၅၈.၆၅၇ ဝ.၉၁၉ ဝ.၁၆၈ ၁.၀၈၇
8. နယ်သာလန် ၅.၆၅၅ ၁၇.၄၆၄ ၂၃.၁၁၉ ၅.၂၅၀ ၄.၀၈၀ ၉.၃၃၀ ၁၀.၇၅၅ ၁၄.၉၂၁ ၂၅.၆၇၆ ၂၈.၁၈၆ ၁၃.၇၈၇ ၄၁.၉၇၃ ၄၉.၂၃၅ ၁၁.၉၇၇ ၆၁.၂၁၂ ၉၁.၇၅၇ ၄၉.၆၈၃ ၁၄၁.၄၄၀ ၈.၀၇၀ ၁.၅၃၃ ၉.၆၀၃
9. ပြင်သစ် ၁၅.၇၄၆ ၆၅.၃၃၉ ၈၁.၀၈၅ ၄.၁၀၆ ၄၃.၉၂၀ ၄၈.၀၂၆ ၄.၉၉၈ ၃၁.၁၅၀ ၃၆.၁၄၈ ၉.၆၃၈ ၅၂.၁၈၉ ၆၁.၈၂၇ ၁၉.၁၉၂ ၉၁.၁၇၁ ၁၁၀.၃၆၃ ၄၁.၆၃၁ ၁၃၄.၈၁၅ ၁၇၆.၄၄၆ ၃.၃၆၁ ၅.၄၃၂ ၈.၇၉၃
10. ပိုလန် ၁.၇၅၄ ဝ.၇၀၂ ၂.၄၅၆ ဝ.၅၅၀ ဝ.၁၈၁ ဝ.၇၃၁ ၁.၆၂၁ ၁.၄၃၅ ၃.၀၅၆ ၁၀.၆၃၅ ၅.၁၆၉ ၁၅.၈၀၄ ၁၇.၈၆၂ ၁.၈၁၂ ၁၉.၆၇၄ ၃၅.၁၈၉ ၄.၅၃၂ ၃၉.၇၂၁ ၂.၄၈၆ ဝ.၁၃ ၂.၆၁၆
11. ဖင်လန် ဝ.၁၁၈ ဝ.၀၀၁ ဝ.၁၁၉ ဝ.၅၀၀ ၁.၃၈၈ ၁.၈၈၈ ဝ.၁၁၃ ဝ.၃၈၃ ဝ.၄၉၆ ဝ.၃၇၈ ဝ.၁၆၉ ဝ.၅၄၇ ဝ.၃၂၇ ဝ.၀၇၄ ဝ.၄၀၁ ဝ.၉၅၃ ၂.၀၆၉ ၃.၀၂၂ ဝ.၄၀၂ ဝ.၀၄၅ ဝ.၄၄၇
12. ဗြိတိန် ၁၆.၅၇၉ ၂၇.၁၆၄ ၄၃.၇၄၃ ၂၆.၉၄၁ ၁၅.၀၁၅ ၄၁.၉၅၆ ၄၈.၅၈၃ ၂၄.၅၀၄ ၇၃.၀၈၇ ၅၃.၇၆၂ ၂၈.၆၃၃ ၈၂.၃၉၅ ၃၅.၂၃၇ ၁၅.၁၃၇ ၅၀.၃၇၄ ၁၃၄.၀၇၈ ၃၃.၁၅၈ ၁၆၇.၂၃၆ ၁၉.၅၃၃ ၂.၂၂၃ ၂၁.၇၅၆
13. ဘယ်လ်ဂျီယမ် ၆.၇၄၄ ၄.၄၂၉ ၁၁.၁၇၃ ၁.၄၈၆ ၃.၈၈၇ ၅.၃၇၃ ၇.၀၃၀ ၁၈.၄၃၁ ၂၅.၄၆၁ ၁၇.၇၁၂ ၇.၁၈၃ ၂၄.၈၉၅ ၂၄.၂၄၆ ၅.၈၅၄ ၃၀.၁၀၀ ၇၇.၅၆၅ ၃၄.၅၅၃ ၁၁၂.၁၁၈ ၉.၂၈၄ ၁.၀၀၁ ၁၀.၂၈၅
14. ဘူဂေးရီးယား ၁၀.၅၀၇ ၅.၂၅၇ ၁၅.၇၆၄ ၇.၂၂၃ ၁၆.၀၁၁ ၂၃.၂၃၄ ၇.၆၆၆ ၁၆.၈၆၇ ၂၄.၅၃၃ ၁၈.၉၆၂ ၃.၂၈၅ ၂၂.၂၄၇ ၂၂.၅၁၀ ၃. ၂၅.၅၁၀ ၁၇.၁၆၃ ၄.၇၄၂ ၂၁.၉၀၅ ဝ.၁၉ ဝ.၁၉၀
15. ရိုမေးနီးယား ဝ.၀၆၂ ဝ.၀၆၂ ဝ.၂၉၁ ဝ.၀၈၃ ဝ.၃၇၄ ဝ.၀၈၄ ဝ.၀၈၄ ဝ.၃၉၆ ၁.၆၉၀ ၂.၀၈၆ ဝ.၇၂၀ ၁.၁၃၅ ၁.၈၅၅ ၁.၈၀၆ ၂.၇၃၅ ၄.၅၄၁ ဝ.၀၇၉ ဝ.၀၇၉
16. လူဇင်ဘတ် ဝ.၀၁၂ ဝ.၀၁၂ ဝ.၀၀၁ ဝ.၀၀၁ ဝ.၀၀၂ ဝ.၀၂၈ ဝ.၀၃၀ ဝ.၀၀၂ ဝ.၀၀၂
17. သြစတြီးယား ၇.၁၇၇ ဝ.၆၇၅ ၇.၈၅၂ ၅.၆၀၇ ဝ.၈၉၆ ၆.၅၀၃ ဝ.၉၉၅ ဝ.၄၈၁ ၁.၄၇၆ ၄.၉၉၉ ဝ.၂၃၅ ၅.၂၃၄ ၃.၂၁၈ ဝ.၁၉၃ ၃.၄၁၁ ၁.၄၀၈ ၃.၈၇၄ ၅.၂၈၂ ဝ.၀၅၅ ဝ.၄၄၅ ဝ.၅၀၀
18. ဟန်ဂေရီ ဝ.၀၁၀ ဝ.၀၀၅ ဝ.၀၁၅ ဝ.၃၃၆ ဝ.၁၀၂ ဝ.၄၃၈ ဝ.၁၅၃ ဝ.၂၃၈ ဝ.၃၉၁ ဝ.၅၂၉ ဝ.၈၃၉ ၁.၃၆၈ ၁.၀၉၇ ၆.၈၁၁ ၇.၉၀၈ ၁.၀၄၄ ၁.၀၄၄
19. အက်စ်တိုးနီးယား ဝ.၁၀၃ ဝ.၁၀၃ ဝ.၀၂၁ ဝ.၀၂၁ ဝ.၃၆၁ ဝ.၇၆၄ ၁.၁၂၅ ဝ.၀၀၁ ဝ.၀၀၁
20. အီတလီ ၆.၈၉၅ ၁၆.၆၂၇ ၂၃.၅၂၂ ၁၄.၁၁၈ ၁၃.၇၀၁ ၂၇.၈၁၉ ၁၆.၇၈၃ ၁၀၇.၉၁၆ ၁၂၄.၆၉၉ ၁၉.၈၇၈ ၉၃.၆၇၈ ၁၁၃.၅၅၆ ၂၂.၉၈၀ ၅၀.၁၅၂ ၇၃.၁၃၂ ၅၁.၁၀၇ ၈၅.၆၆၇ ၁၃၆.၇၇၄ ၅.၆၅၅ ၄.၉၉၂ ၁၀.၆၄၇
21. အိုင်ယာလန် ဝ.၀၈၂ ဝ.၃၄၂ ဝ.၄၂၄ ဝ.၄၃၂ ဝ.၂၁၉ ဝ.၆၅၁ ၂.၀၃၉ ဝ.၀၉၂ ၂.၁၃၁ ၂.၁၈၇ ၁.၆၆၆ ၃.၈၅၃ ၂.၃၉၃ ၂.၈၅ ၅.၂၄၃ ၈.၀၈၉ ၇.၂၈၇ ၁၅.၃၇၆ ဝ.၁၀၈ ဝ.၂၅၇ ဝ.၃၆၅
22. ပေါ်တူဂီ ဝ.၀၃၇ ဝ.၀၂၆ ဝ.၀၆၃ ၂.၅၈၃ ဝ.၀၅၅ ၂.၆၃၈ ဝ.၄၃၇ ဝ.၀၇၈ ဝ.၅၁၅ ၁.၀၀၀ ဝ.၅၆၅ ၁.၅၆၅ ဝ.၆၃၇ ဝ.၀၅၈ ဝ.၆၉၅ ၁.၀၂၈ ဝ.၃၈၈ ၁.၄၁၆ ဝ.၀၀၁ ဝ.၀၃၇ ဝ.၀၃၈
၂ အခြားဥရောပ ၅.၄၇၈ ၃.၀၅၀ ၈.၅၂၈ ၃.၉၇၇ ၄.၃၇၁ ၈.၃၄၈ ၃.၈၈၂ ၆.၅၈၂ ၁၀.၄၆၄ ၅.၁၄၂ ၁၉.၄၁၁ ၂၄.၅၅၃ ၁၁.၈၀၇ ၁၁.၅၆၄ ၂၃.၃၇၁ ၁၃.၄၉၈ ၂၂.၅၈၃ ၃၆.၀၈၁ ဝ.၄၇၈ ဝ.၅၅၁ ၁.၀၂၉
2. ဆွစ်ဇာလန် ၅.၄၇၆ ၂.၉၉၇ ၈.၄၇၃ ၃.၆၄၈ ၄.၃၇၁ ၈.၀၁၉ ၂.၆၅၀ ၆.၅၇၀ ၉.၂၂၀ ၁.၇၀၄ ၁၉.၃၂၄ ၂၁.၀၂၈ ၁၀.၃၁၉ ၁၁.၀၅ ၂၁.၃၆၉ ၈.၃၂၉ ၂၁.၄၈၁ ၂၉.၈၁၀ ဝ.၂၂၆ ဝ.၄၈၇ ဝ.၇၁၃
3. နော်ဝေး ဝ.၀၀၂ ဝ.၀၁၀ ဝ.၀၁၂ ဝ.၃၂၉ ဝ.၃၂၉ ၁.၂၃၂ ဝ.၀၁၂ ၁.၂၄၄ ၃.၄၃၈ ဝ.၀၈၇ ၃.၅၂၅ ၁.၄၈၈ ဝ.၅၁၄ ၂.၀၀၂ ၅.၁၆၉ ၁.၁၀၂ ၆.၂၇၁ ဝ.၂၅၂ ဝ.၀၆၄ ဝ.၃၁၆
၃ အမေရိက နိုင်ငံများ ၃၈.၀၉၄ ၂၈၄.၃၃၅ ၃၂၂.၄၂၉ ၁၅.၂၂၂ ၁၃၆.၁၃၉ ၁၅၁.၃၆၁ ၃၅.၇၆၈ ၁၀၀.၃၄၂ ၁၃၆.၁၁၀ ၆၄.၈၄၁ ၅၂၂.၁၈၇ ၅၈၇.၀၂၈ ၈၈.၂၀၃ ၁၈၇.၂၆၂ ၂၇၅.၄၆၅ ၂၅၇.၇၆၄ ၆၉၆.၈၃၄ ၉၅၄.၅၉၈ ၁၈.၇၈၁ ၃၉.၉၂၅ ၅၈.၇၀၆
1. ကနေဒါ ဝ.၀၄၄ ၄.၈၆၀ ၄.၉၀၄ ၂.၅၄၉ ၆.၅၀၈ ၉.၀၅၇ ၃.၃၁၁ ၈.၅၄၂ ၁၁.၈၅၃ ၄.၁၂၄ ၁၀.၉၃၇ ၁၅.၀၆၁ ၁၁.၀၇၃ ၁၃.၆၃၇ ၂၄.၇၁၀ ၄၀.၃၂၀ ၃၉.၉၁၄ ၈၀.၂၃၄ ၂.၉၄၈ ၂.၆၆၇ ၅.၆၁၅
3. ပနားမား ဝ.၀၂၈ ဝ.၀၁၂ ဝ.၀၄၀ ဝ.၀၅၁ ဝ.၀၄၉ ဝ.၁၀၀ ၂.၂၂၁ ၂.၂၂၁ ဝ.၇၅၉ ဝ.၃၈၂ ၁.၁၄၁ ၁.၄၃၈ ဝ.၂၀၉ ၁.၆၄၇ ဝ.၀၇၉ ဝ.၀၇၉
4. ဘရာဇီး ၁.၄၉၂ ၁၂.၄၇၀ ၁၃.၉၆၂ ဝ.၈၃၆ ၅.၂၀၀ ၆.၀၃၆ ဝ.၇၇၅ ၁၀.၀၈၈ ၁၀.၈၆၃ ၄.၃၀၇ ၁၄.၀၂၄ ၁၈.၃၃၁ ၂.၁၁၃ ၃၄.၃၀၅ ၃၆.၄၁၈ ၉.၃၆၈ ၁၅၀.၆၉၂ ၁၆၀.၀၆၀ ဝ.၀၅၅ ၁၄.၆၉၂ ၁၄.၇၄၇
5. ကိုလံဘီယာ ဝ.၃၀၃ ဝ.၀၈၂ ဝ.၃၈၅ ၂.၁၀၅ ဝ.၁၃၇ ၂.၂၄၂ ဝ.၁၁၆ ဝ.၁၄၂ ဝ.၂၅၈ ၁.၃၁၇ ဝ.၀၂၈ ၁.၃၄၅ ၂.၂၄၀ ဝ.၀၀၇ ၂.၂၄၇ ၁.၂၃၃ ဝ.၀၇၃ ၁.၃၀၆ ဝ.၁၁၅ ဝ.၁၁၅
6. အာဂျင်တီးနား ၆.၅၄၆ ၃.၂၉၉ ၉.၈၄၅ ၆.၀၃၅ ၄.၃၀၆ ၁၀.၃၄၁ ၅.၄၄၄ ၁.၈၄၉ ၇.၂၉၃ ၁.၄၃၂ ၃.၀၆၁ ၄.၄၉၃ ၂.၄၈၅ ၁၀.၉၁၈ ၁၃.၄၀၃ ၄.၁၅၂ ၇.၀၂၂ ၁၁.၁၇၄ ဝ.၀၆၀ ဝ.၂၈၈ ဝ.၃၄၈
7. အီကွေဒေါ ဝ.၂၄၉ ဝ.၂၄၉ ဝ.၂၁၃ ဝ.၂၁၃ ဝ.၅၃၉ ဝ.၀၁၀ ဝ.၅၄၉ ဝ.၇၂၀ ဝ.၀၉၂ ဝ.၈၁၂ ဝ.၁၂၉ ဝ.၁၈၆ ဝ.၃၁၅ ၉.၁၅၈ ဝ.၂၈၂ ၉.၄၄၀
8. အမေရိကန် ၂၉.၄၄၇ ၂၆၃.၆၂၄ ၂၉၃.၀၇၁ ၂.၈၁၅ ၁၁၉.၉၇၆ ၁၂၂.၇၉၁ ၂၄.၇၇၈ ၇၉.၆၆၂ ၁၀၄.၄၄၀ ၅၀.၅၉၅ ၄၉၄.၀၄၅ ၅၄၄.၆၄၀ ၆၉.၂၁၇ ၁၂၇.၆၈၅ ၁၉၆.၉၀၂ ၁၉၂.၀၅၀ ၄၉၈.၅၈၀ ၆၉၀.၆၃၀ ၁၅.၅၂၄ ၂၂.၂၇၈ ၃၇.၈၀၂
၄ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများ ၁၁၆.၄၄၀ ၁၈၄.၂၃၉ ၃၀၀.၆၇၉ ၁၂၅.၄၅၉ ၁၄၁.၈၃၈ ၂၆၇.၂၉၇ ၁၀၁.၉၄၄ ၁၆၅.၃၆၂ ၂၆၇.၃၀၆ ၁၂၉.၈၃၆ ၂၄၃.၅၁၇ ၃၇၃.၃၅၃ ၁၁၈.၉၉၅ ၂၆၂.၃၅၆ ၃၈၁.၃၅၁ ၁၂၃.၀၅၂ ၂၇၇.၂၉၂ ၄၀၀.၃၄၄ ၁၀.၁၉၀ ၁၇.၅၄၄ ၂၇.၇၃၄
1. ကူဝိတ် ၄၈.၄၇၇ ၁.၃၃၇ ၄၉.၈၁၄ ၅၁.၅၆၅ ဝ.၀၀၆ ၅၁.၅၇၁ ၁၆.၁၉၇ ဝ.၂၅၄ ၁၆.၄၅၁ ၁၉.၈၇၇ ဝ.၉၆၀ ၂၀.၈၃၇ ၁၇.၀၄၀ ဝ.၁၁၉ ၁၇.၁၅၉ ၇.၅၂၀ ဝ.၂၅၃ ၇.၇၇၃ ဝ.၄၉၁ ဝ.၀၉၂ ဝ.၅၈၃
2. ကာတာ ၁.၂၉၂ ၄.၆၂၅ ၅.၉၁၇ ၁.၁၅၉ ၄.၆၈၇ ၅.၈၄၆ ဝ.၈၂၆ ဝ.၄၃၂ ၁.၂၅၈ ၂.၈၂၁ ၁.၇၉၀ ၄.၆၁၁ ၃.၁၁၆ ဝ.၀၀၃ ၃.၁၁၉ ၃.၈၀၂ ဝ.၀၀၃ ၃.၈၀၅ ဝ.၂၆၅ ဝ.၂၆၅
4. ဘာရိန်း ဝ.၁၄၅ ဝ.၁၄၅ ၁.၂၉၆ ဝ.၀၀၁ ၁.၂၉၇ ဝ.၆၀၅ ဝ.၀၁၅ ဝ.၆၂၀ ဝ.၈၀၃ ဝ.၁၆၉ ဝ.၉၇၂ ၁.၃၁၁ ၁.၃၁၁ ၁.၀၂၁ ဝ.၀၃၈ ၁.၀၅၉ ဝ.၁၄၃ ဝ.၁၄၃
5. ယီမင် ဝ.၀၈၅ ဝ.၀၀၂ ဝ.၀၈၇ ဝ.၀၇၆ ဝ.၃၃၁ ဝ.၄၀၇ ဝ.၀၁၇ ဝ.၅၆၆ ဝ.၅၈၃ ဝ.၄၆၂ ဝ.၀၃၁ ဝ.၄၉၃ ဝ.၅၄၅ ဝ.၁၄၅ ဝ.၆၉၀ ဝ.၃၀၅ ဝ.၀၅၄ ဝ.၃၅၉ ဝ.၀၁၁ ဝ.၀၁၁
6. လက်ဘနွန် ဝ.၀၆၇ ဝ.၀၆၇ ဝ.၀၀၂ ဝ.၀၃၆ ဝ.၀၃၈ ဝ.၀၀၇ ဝ.၀၀၇ ဝ.၀၉၀ ဝ.၂၅၄ ဝ.၃၄၄ ဝ.၀၅၆ ဝ.၀၅၆ ဝ.၀၉၁ ၂.၁၇၆ ၂.၂၆၇
7. အီဂျစ် ဝ.၄၅၀ ဝ.၂၉၄ ဝ.၇၄၄ ဝ.၂၅၇ ဝ.၁၇၈ ဝ.၄၃၅ ဝ.၁၇၃ ဝ.၅၁၃ ဝ.၆၈၆ ဝ.၁၇၉ ၂.၂၆၂ ၂.၄၄၁ ဝ.၂၅၆ ဝ.၅၀၈ ဝ.၇၆၄ ဝ.၇၃၀ ဝ.၆၇၈ ၁.၄၀၈ ဝ.၀၂၉ ဝ.၂၂၃ ဝ.၂၅၂
8. အစ္စရေး ဝ.၁၈၇ ဝ.၁၀၉ ဝ.၂၉၆ ဝ.၂၈၇ ဝ.၁၆၆ ဝ.၄၅၃ ဝ.၆၇၈ ဝ.၅၂၅ ၁.၂၀၃ ၂.၄၄၄ ၁.၈၉၀ ၄.၃၃၄ ၄.၃၉၉ ၆.၂၅၉ ၁၀.၆၅၈ ၅.၈၁၃ ၁.၁၄၁ ၆.၉၅၄ ဝ.၁၉၄ ဝ.၅၂၆ ဝ.၇၂၀
9. အဇာဘိုင်ဂျန် ဝ.၁၂၆ ဝ.၁၂၆ ဝ.၀၂၅ ဝ.၀၂၅
10. အီရတ် ဝ.၂၅၄ ဝ.၂၅၄ ၂.၇၀၉ ၂.၇၀၉ ဝ.၉၁၇ ဝ.၉၁၇ ဝ.၀၇၁ ဝ.၀၇၁ ၂.၆၁၆ ၂.၆၁၆ ဝ.၁၃၃ ဝ.၁၃၃
11. အီရန် ဝ.၃၃၁ ၄၀.၈၈၀ ၄၁.၂၁၁ ဝ.၀၇၉ ၃၀.၀၆၂ ၃၀.၁၄၁ ဝ.၀၉၄ ၂၀.၇၀၆ ၂၀.၈၀၀ ၂.၀၈၁ ၂၉.၂၅၈ ၃၁.၃၃၉ ၁.၃၀၆ ၃၇.၇၄၁ ၃၉.၀၄၇ ၁.၆၇၁ ၃၃.၅၁၃ ၃၅.၁၈၄ ၁.၄၄၉ ၁.၄၄၉
12. အာရပ် စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ၃၅.၂၉၄ ၅၈.၁၃၂ ၉၃.၄၂၆ ၃၇.၅၅၀ ၅၂.၉၂၆ ၉၀.၄၇၆ ၆၆.၀၃၃ ၇၅.၈၈၉ ၁၄၁.၉၂၂ ၇၅.၀၂၃ ၁၂၄.၄၈၆ ၁၉၉.၅၀၉ ၆၆.၆၉၀ ၁၂၈.၉၉၃ ၁၉၅.၆၈၃ ၇၃.၃၅၉ ၁၃၅.၈၄၇ ၂၀၉.၂၀၆ ၆.၃၁၈ ၆.၃၁၅ ၁၂.၆၃၃
14. အိုမင် ဝ.၂၆၆ ၉.၂၁၀ ၉.၄၇၆ ဝ.၆၀၀ ၅.၉၀၇ ၆.၅၀၇ ဝ.၀၃၀ ၅.၇၃၈ ၅.၇၆၈ ဝ.၉၉၁ ၄.၂၂၈ ၅.၂၁၉ ၂.၃၄၈ ၇.၆၀၉ ၉.၉၅၇ ၄.၃၄၂ ၈.၀၉၆ ၁၂.၄၃၈ ဝ.၂၉၇ ဝ.၄၂၁ ဝ.၇၁၈
15. ဂျော်ဒန် ဝ.၂၀၈ ဝ.၂၉၀ ဝ.၄၉၈ ဝ.၁၂၆ ဝ.၅၄၇ ဝ.၆၇၃ ဝ.၃၉၄ ဝ.၃၉၄ ဝ.၁၉၁ ဝ.၅၇၅ ဝ.၇၆၆ ဝ.၄၄၆ ဝ.၄၄၆ ဝ.၂၄၉ ၁.၄၃၃ ၁.၆၈၂ ဝ.၀၅၈ ဝ.၁၀၆ ဝ.၁၆၄
16. ဆော်ဒီအာရေဗျ ၂၉.၇၀၅ ၆၉.၂၉၃ ၉၈.၉၉၈ ၃၁.၉၃၅ ၄၆.၉၇၈ ၇၈.၉၁၃ ၁၄.၃၅၈ ၆၀.၁၈၈ ၇၄.၅၄၆ ၂၃.၆၃၄ ၇၇.၅၈၉ ၁၀၁.၂၂၃ ၂၁.၅၃၈ ၈၀.၃၀၇ ၁၀၁.၈၄၅ ၂၁.၅၀၂ ၉၄.၀၆၀ ၁၁၅.၅၆၂ ၂.၂၅၁ ၈.၄၁၂ ၁၀.၆၆၃
၅ ကျွန်းနိုင်ငံများ ၈.၈၈၃ ၈၃.၆၀၈ ၉၂.၄၉၁ ၉.၆၄၉ ၈၇.၈၂၀ ၉၇.၄၆၉ ၁၂.၇၄၀ ၁၀၀.၉၁၉ ၁၁၃.၆၅၉ ၉.၈၀၈ ၇၉.၀၈၀ ၈၈.၈၈၈ ၉.၈၇၉ ၉၄.၂၁၇ ၁၀၄.၀၉၆ ၂၇.၁၀၀ ၁၄၄.၅၅၂ ၁၇၁.၆၅၂ ၁.၆၇၉ ၁၃.၈၁၂ ၁၅.၄၉၁
1. နယူးဇီလန် ဝ.၂၅၃ ၁၄.၅၆၅ ၁၄.၈၁၈ ဝ.၆၉၄ ၁၀.၇၆၆ ၁၁.၄၆၀ ဝ.၃၀၆ ၁၁.၂၉၀ ၁၁.၅၉၆ ဝ.၅၀၅ ၁၄.၃၇၁ ၁၄.၈၇၆ ၁.၂၅၄ ၁၈.၁၈၇ ၁၉.၄၄၁ ၃.၈၅၂ ၂၃.၄၁၅ ၂၇.၂၆၇ ဝ.၁၄၃ ၁.၃၈ ၁.၅၂၃
2. သြစတြေလျ ၈.၆၃၀ ၆၉.၀၄၃ ၇၇.၆၇၃ ၈.၉၅၅ ၇၇.၀၅၄ ၈၆.၀၀၉ ၁၂.၄၃၄ ၈၉.၆၂၉ ၁၀၂.၀၆၃ ၉.၃၀၃ ၆၄.၇၀၉ ၇၄.၀၁၂ ၈.၆၂၅ ၇၆.၀၃ ၈၄.၆၅၅ ၂၃.၂၄၈ ၁၂၁.၁၃၇ ၁၄၄.၃၈၅ ၁.၅၃၆ ၁၂.၄၃၂ ၁၃.၉၆၈
၆ အခြားနိုင်ငံများ ၂၀၂.၄၄၃ ၃၇.၃၇၃ ၂၃၉.၈၁၆ ၁၁၃.၈၂၂ ၂၀.၇၇၉ ၁၃၄.၆၀၁ ၃၁.၃၁၅ ၈၆.၇၁၆ ၁၁၈.၀၃၁ ၃၉.၄၁၂ ၉၂.၀၉၈ ၁၃၁.၅၁၀ ၇၅.၄၇၃ ၁၀၁.၈၄၃ ၁၇၇.၃၁၆ ၁၅၉.၁၄၄ ၂၄၃.၀၀၄ ၄၀၂.၁၄၈ ၁၈.၈၈၅ ၂၀.၀၀၃ ၃၈.၈၈၈
စုစုပေါင်း ၉၁၃၅.၆၀၂ ၉၀၃၅.၀၆၃ ၁၈၁၇၀.၆၆၅ ၈၉၇၇.၀၁၅ ၉၀၆၈.၉၁၄ ၁၈၀၄၅.၉၂၉ ၁၁၂၀၃.၉၅၇ ၁၃၇၅၉.၅၀၇ ၂၄၉၆၃.၄၆၄ ၁၂၅၂၃.၇၁၇ ၁၆၆၃၃.၁၄၆ ၂၉၁၅၆.၈၆၃ ၁၁၁၃၆.၈၇၈ ၁၆၅၇၇.၉၄၈ ၂၇၇၁၄.၈၂၆ ၁၁၉၀၄.၃၉၃ ၁၇၁၉၈.၈၅၄ ၂၉၁၀၃.၂၄၇ ၈၅၅.၆၄၉ ၁၁၁၆.၄၈၅ ၁၉၇၂.၁၃၄